Reer Iswiidhan oo badankoodu taageereen siyaasadda qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baarlamaanka dalkaan Iswiidhan. sawir: Sawirkii : Maja Suslin / TT
Reer Iswiidhan oo badankoodu taageereen siyaasadda qaxootiga
La daabacay måndag 21 mars 2016 kl 11.36
Dadka dalkaan Iswiidhan ayaa badankoodu taageersan qorshaha ay dawladda dalkaani rabto in ay ku adkeyneyso siyaasaddeeda qaxootiga la xiriirta.
Baaritaan uu sameeyey machadka Novus ee ra’yiga dadweynaha uruuriya kaas oo uu tafishinka Iswiidhan hawshaas u dirsadey ayaa sheegey in boqolkiiba 70 dadka dalkaani taageersan yihiin wax wanaagsanna u arkaan qorshaha dawladdu rabto in ay ku adkeyso sharciyada qaxootiga la xiriira.
Machadka Novus ayaa kun qof weydiiyey sida ay u arkaan qorshaha dawladdu guga soo socda baarlamaanka dalkaan ku soo bandhigi doonto kaas oo la xiriira in ay ku adkeyneyso sharciyada dadka magangalyo doonka ah.
Sharciyadaas dawladdu soo bandhigeyso ayaa waxaa canbaareeyey xisbiyada Vänsterparti-ga, Center-ka iyo Miljöparti-ga.
Qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiga Miljöparti-ga ayaa madaxda xisbigooda ku eedeeyey in arrinkaasi uu ka hor imaanayo caqiidada xisbigoodu aaminsan yahay.
Sharciyadaan lagu adkeynayo sharciyada qaxootiga ayaa waxaa ka mid ah in dadka qaxootiga ah la siiyo sharci mudadiisu u dhexeeyso hal sano ilaa iyo saddex sano taas oo aan aheyn sharci joogta ah oo ay dadkaasi dalkaan ku dagayaan, waxaa kaloo iyana la xadadayaa in dadka eheladooda loo keenayo iyo sidoo kale in la adkeeyo shuruudaha dadka masaariifta lagu siiyo.
Sharcigaan ayaa wuxuu soconayaa muddo saddex sano ah.
Dadkii ra’yi uruurintaas la weydiiyey ayaa boqolkiiba 69 waxay sheegeen in soo jeedintaani tahay mid aad u wanaagsan meesha boqolkiiba 22 ay u arkaan in uu yahay mid xun.
Ragga ayaa qorshahaan taageeradiisu dumarka uga badan tahay inkastoo ay jiraan dumar badan oo iyaguna arrinkaas taageersan.
Dadka waaweyn ayaa iyaguna dhankooda qorshahaan taageersan in ka badan marka la barbardhigo dhallinyarada.
Taageerayaasha xisbiga Sverigedemokrati-ga ayaa iyagu arrinkaan wax wanaagsan u arka. Xisbiyada garabka middig ayaa taageero xoog leh u haya qorshahaan marka la barbardhigo taageerayaasha xisbiyada garabka biddix.